ऋषी धमलाको पत्नी तथा नायीका एलि’जा गौतम खानेकुरा लिएर एक जना सुत्केरी महिला’लाई भेट्न गएकी छन् । भर्खरै सुत्केरी भएकी महिला भोकै रहेको खबर ‘पाएपछि उनी सुत्केरी मसला, मासु, चामल, अण्डा लगायतका बस्तु लिएर पुगेकी हुन् ।
सुत्केरी भएदेखि नै खान नपाएका कारण निकै कमजोर भएकी महिला एलिजाले ल्याएको ति सामान देखेर निकै भावुक भइन् । आफुले पनि खान नपाएका कारण ‘सुत्केरी महिलाको दुध पनि आएको छैन । जसका कारण भर्खर जन्मेको बच्चाले आमाको दुध पेटभरी’ खान पाएको छैन ।
यस्तो भिडियो सार्वजनिक भएपछि एलि’जाले अरुको पनि ध्यान आकर्षीत होस् भनेर आफु स’हयोग लिएर पुगेको बताइन् । मैले एक्लै गरेर केही हुने होइन, अरुले पनि यो देखेर सह’योग गर्नुहोला भनेर मैले लिएर आएको हो, उनले भनिन्, सुत्केरी भएको बेलामा पोषिलो खा’नुपर्ने महिला भोकै बस्नुपर्दा निकै कठिन हुन्छ ।
एलिजाले निरास भएकी महिलालाई निकै साहस दिएकी छन् । काखमा भएको बच्चाको भविष्यको लागि पनि आ’फुले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन उनले दिइन् ।
यस्तो अवस्थामा छोडेर हिड्ने श्रीमानका लागि भने उनले निकै दुख ब्यक्त गरिन् । कस्तो कठोर मन हो ? उनले भनिन्, केही दिन नजिक भएका ब्यक्तिलाई त निकै माया ‘लाग्छ तर जिवनभर साथ दिने_ भनेर विवाह गरेर ल्याएको श्रीमती_लाई गर्भवती भएको बे’लामा छोडेर कसरी हिडन् सकेका होलान् उनका श्रीमान ? यस्तो अवस्था_मा _छोडेर जाने श्रीमानलाई कारवाही हुनुपर्ने पनि एलिजाले बताइन् ।
उनले श्रीमान संगै नबसेपछि बच्चा_हरुको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताइन् । महिलालाई निकै साहस दिँदै भनिन्, अलि कडा हुनुस्, प्रेसर_को विरामी हुनुहुँदो रहेछ बच्चा’को भविष्य_का लागि अब निकै कठोर भएर बाँच्नुपर्छ ।
उनले महिलालाई साहस दिँदै भनिन्। समाज’मा संघर्षशिल महिलाले एक्लै हुर्काएका सन्तानले देश र आफ्नो नाम राखेका थुप्रै उदाहरण छन् त्यसैले बच्चाको मुख हेरेर आफ्नो ख्या’ल गर्न उन’ले सुझाव दिइन् । भि’डियो हेर्नुहोस
Prevनेपालमा आज फेरि थप १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
Nextघरमा पस्‍न नपाएपछि बारीमै किरिया, आफ्नै आमा’लाई छुन र दाग’बत्ती पनि दिन पाएनन्
दुखद खबर : जीप दुर्घ’टना हुँदा वडा अध्यक्ष सहित ६ को मृ’त्यु…
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (63506)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (60527)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (52072)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (50812)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (49742)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46555)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (46458)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमीसहित फेला परिन हराएकी लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (41399)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (38616)
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित) (33745)
८ वर्ष अगाडी थीर कोइरालाले अन्जु पन्तसँग लिएको त्यो अन्तरवार्ता, जतिबेला उनी मनोजकी श्रीमती थिइन् (भिडियोसहित)
प्रवीण बाँस्तोला मृ त्यु-प्रकरण: सरकारी वकिल कार्या’लयले गर्‍यो यी ६ जनाविरूद्ध मु’द्दा दायर